Ngenzenjani uma ingane yami ingangihloniphi | Amadoda anesitayela
Ngenzenjani uma ingane yami ingangihloniphi
U-Alicia tomero | 05/11/2021 22:43 | Kubuyekezwe ku- 07/11/2021 13:17 | Ukunakekelwa komuntu siqu
Siyazi mathupha ukuthi kunjani isigaba se ubusha. Ngaphandle kokuqhubeka, nathi ngokwethu siphile lesi sigaba ngobunzima obuthile. Zonke izingane uma zifika kulesi sigaba ngokuvamile bhekana nakho ngendlela engcono kakhuluNakuba abanye abazali kufanele babhekane nombuzo othi 'ungenzani uma ingane yakho ingakuhloniphi'.
Obaba nomama sizibuza imibuzo eminingi, asazi noma inkinga ikithi, noma imfundo yethu ukuvumela kakhulu noma uma izingane zinohlobo oluthile ukuziphatha ukuphazamiseka. Ngokungangabazeki, isizukulwane ngasinye esiza ngaphambi kwesinye sihlala sigxeka esedlule. Kuvame ukuphikiswana ngokuthi ingabe intsha yanamuhla ayihloniphi lutho, kodwa esizukulwaneni ngasinye leli binzana liyaqhubeka ngokuhamba kwesikhathi.
1 Imiphumela yokuziphatha kwentsha
2 Ungasabela kanjani lapho ingane yakho ingakuhloniphi?
Imiphumela yokuziphatha kwentsha
Intsha inesigaba esinzima sokukwazi ukuhlinzeka ngakho konke izinguquko ezingokomzimba nezingokwengqondo. Yinkathi abafuna ukuzakhela ngayo ubuntu babo futhi abafuna ukuyenza ngokuzimela ngokuphelele. Nomaphi lapho sasibona khona izingane ezinamathele kubazali bazo, manje babona umhlaba ohlukile ngaphandle kwamakhaya abo. Konke abakubona kweminye imindeni bazofuna ukumelwa nasemzini wabo yingakho beqala ukugxeka konke abahlale bekwazi.
Izimbobo zangaphambili zentsha qala ukuguqula futhi kuzoba ingxenye yokugcina eqeda ukuvuthwa, yingakho basenohlobo oluthile ukungqubuzana ekuvuthweni kwayo. Intsha ivame ukuzizwa ingazinzile futhi ingaqondwa futhi abaningi babo baguqula isimo sabo sengqondo sibe ukuvukela.
Okufanele kucace ukuthi ungakwazi njalo finyelela inkhulumomphendvulwano phakathi kwabazali nezingane. Uma osemusha ephikisa, kufanele umlalele futhi umvumele athukuthele uma efuna, unelungelo lonke. Into embi kakhulu lapho ungenakho lokho kusabela kwemvelo futhi ufika ukungahloniphi bese kuba nolaka.
Ungasabela kanjani lapho ingane yakho ingakuhloniphi?
Okubalulekile ukwazi ukuthi kufanele usabele kanjani lapho ingane yakho uyaphakamisa izwi lakhe futhi akakuhloniphi. Akudingekile ukuthi uhlangane naye ngoba lokho ngeke kuxazulule izinto okwamanje, kodwa kunalokho kuzoba kubi kakhulu. Kuyacasula kakhulu uma owakho umntwana ekuthuka, ekhuluma amazwi abuhlungu noma akwenza udelele kakhulu. Ubaba noma umama ozolile lapho ebhekene nokusabela okunjalo kuzobenza bangafanelani namacebo futhi uzizwe uzolile.
Inkhulumomphendvulwano iyona ebaluleke kakhulu njengoxhumana naye. Kufanele ucabange ukuthi ukuziphatha kwabo kuyinto engeyintsha, ngakho kufanele ube nekhono lokuzama siqonde isikhathi. Kodwa ungamvumeli ahlukane nakho noma akunyathele, kufanele ukhombise ukuthi ngubani onegunya futhi kungani.
Lapha ungaqhubeka ukutshala izithombo ezincane, Njengoba njenganoma yikuphi ukucasuka kwengane encane, uma isisombululo singathathwa, sizophinda. Zibeke endimeni kamama noma ubaba futhi uphinda ukuthi imikhawulo nemithetho ibekwe ukuze kuzuze bonke. Uma ingane yakho yenza izinto ezingalungile futhi ingakuhloniphi, kuzoba nemiphumela, kodwa ukuthi yenze kanjena isuke izuzisa yona. Kusukela lapha kumele kucace ukuthi okuhloswe ukuthi kwenziwe yilokho esikhathini esizayo ube umuntu ongcono.
Ngesikhathi sokucasuka okukhulu, uma ingane yakho ikuthuka, ungakwenzi okufanayo. Ngeke kube indlela engcono kakhulu yokuxhumana zama ukumela ukushaqeka kwakho eveza imishwana efana nokuthi “Ungangikhulumisi kanjalo, ngoba kubuhlungu,” esikhundleni sokuqhubeka ngemishwana edabukisayo noma e-burlesque.
Kodwa nawe ungagobi ngokuhlala udlala isisulu futhi umvumele abone ukuthi unesikhathi esibi. Kufanele uqine ngokomzwelo. Uma ingane yakho ibona ukuthi uyayekelela noma ikubona ubuthakathaka, iyohlala inaleyo ndlela ukuze iphinde ibonise indelelo futhi iyohlala ibalekela.
Ukulalela ingane yakho kuyindlela engcono kakhuluUma uqinisa inhlonipho ekugcineni nabo bazofuna ukuziphatha ngendlela efanayo, kodwa ngokuhamba kwesikhathi. Ungambuza ukuthi kungani kukhona into emenza athukuthele futhi hlaziya ukuthi inkinga ikuphi. Uma ekulalela, uzokwazi ukuthi kuyindlela enhle yokuthola isisombululo sentukuthelo enjalo, futhi yini engcono esandleni sikababa noma umama ochwepheshe.
Ukuxhumana okukhona kuyohlale kuyindlela engcono kakhulu yokuthi yonke into izinze, uma ubeka intshisekelo yakho kukho, ngokuhamba kwesikhathi nayo izobheka kuwe. Ukubekezela kuyisihluthulelo esingcono kakhulu ukuze udlule kulowo mzuzu obuhlungu, kodwa ngokuhamba kwesikhathi ungafika esiphethweni esihle.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Ngenzenjani uma ingane yami ingangihloniphi